Izindaba - Ukubuya kwamakhasimende
Imigqomo eyenziwe ngokwezifiso
Iziqukathi Zokwakha Indleke
Iziqukathi Zokusonga Mesh
Izinsimbi Zokulenga Zensimbi
Ama-Paneli Ahlanganisiwe Odonga
I-Rack Bench Rack
Isitezi Esiphakanyisiwe SePhaneli
Bin Shelf & Amakhabethe
Izinsimbi Ezicijwa Ngemigqomo YeShelfull
Wire Shelving Nge Shelf Imigqomo
Izinsimbi Ezicijwa Ngemigqomo Yokugcina
I-Wire Shelving Trolley Enemigqomo YeShelfull
I-Wire Shelving Trolley enezinkonkxa zeShelf
I-Wire Shelving Trolley Enemigqomo Yokugcina
Insimbi Shelving Nge Shelfull Bins
IKhabinethi Enemigqomo YeShelfull
IKhabinethi Enemigqomo Yeshelofu
Izinqola & Onodoli
Izinqola Zezandla Ezingenamsindo
Isibambo Esingagqwali Esingaguquki
Isibambo Esigoqekayo Esingenantambo
Pallet yebhodlela lamanzi
UGuanyu uhlala ekholelwa ukuthi ukwaneliseka kwamakhasimende kubaluleke njengokuphila. Namuhla, silandelela ikhwalithi yomkhiqizo weLiqun Pharmaceuticals.
Sixoxisane nabasebenzi abaphambili emgqeni wokukhiqiza futhi banelisekile kakhulu ngebhokisi lezinto ezikhiqizwe yiGuanyu Group. Abasebenzi bathi ibhokisi lezimpahla lenze ukuthi ulayini wokukhiqiza ongcolile ucoceke., Khulisa umkhiqizo wabo. Ibhokisi lezimpahla lihamba ngokushelela kulayini wokukhiqiza, futhi ukuqiniswa kokulwa nesiliphu ezansi kwenza ibhokisi lezimpahla lingasheleli. Hlela kusengaphambili ilebula yokufaka amalebuli ebhakhodi ukwenza ukuhlukaniswa kwezidakamizwa kube lula
ILiqun Pharmaceutical Group ithe ibhokisi lezimpahla elikhiqizwe yiQingdao Guanyu Plastic Co, Ltd. lihlangabezana nezidingo zeLiqun Group futhi lizobambisana neGuanyu kwezinye izimboni ezinjengezitolo ezinkulu esikhathini esizayo.
Ibhokisi lezimpahla elikhiqizwe yiQingdao Guanyu lilungele ukusetshenziswa ezimbonini eziningi. Izimbambo ezansi kwebhokisi zenza ibhokisi lezimpahla lihlale isikhathi eside.
Ipulasitiki yaseGuanyu izibophezele ekusungulweni kwe-oda lokugcinwa kwempahla, isindisa amakhasimende njalo ngezindleko zokugcina izinto, futhi nokwenza ukugcinwa kwempahla kube yindawo entsha yokukhulisa inzuzo yamabhizinisi.
Esikhathini esizayo, iQingdao Guanyu izoqhubeka nokulandelela ulwazi lomsebenzisi futhi ilwele ukukunikeza izixazululo ezingcono zokwenza izinto.
Isikhathi Iposi: May-18-2021
Ikheli: Cha. 624, Qingshan Road, Qingdao, China
Ucingo: + 86-532-87899622
Imigqomo Yesitoreji Esibekiwe Epulasitiki, Isitaki nama-Hang Bins, Imigqomo Yesitoreji Esinqwabekile, Ukubeka Imigqomo Yokuthatha, Imigqomo Yokugoqa Ngeplastiki, Imigqomo Yokugcina Isitoreji,